Tari-dalana Toriteny Alahady 01 Janoary 2017 (Alahady EPIFANIA sady Taombaovao) – Zanaky ny Fiangonana Loterana Malagasy (ZFLM)
Faly miarahaba antsika rehetra amin’ny anaran’i Jesosy nahavita soa ny Krismasy. Hitondra fiadanana tokoa ho antsika anie izany. Indro atolotra anareo indray ny tari-dalana tsotra momba ny texte izay hotoriana amintsika amin’ny Alahady faha 01 Janoary 2017 ho avy izao. Samy ho tahian’Andriamanitra eh. Mirary Taona Vaovao finaritra ho antsika rehetra.
TAOMBAOVAO SY EPIFANIA, MATIO 4:13–17.
“Mibebaha ianareo, fa efa akaiky ny Fanjakan’ny Lanitra”.
Raha ny Alahady manaraka ny Taombaovao ny Epifania dia mifanindry kosa izany amin’ity taona ity. Izany hoe, sady Taona vaovao 2017 no Alahadin’ny Epifania ity 01 Janoary 2017 ity. Andeha hampifandraisintsika ihany koa araka izany ny hafatr’Andriamanitra ho antsika entin’izany vanim-potoana roa mifanindry izany.
Voalohany, tsara raha ampahatsiahivina kely amintsika eto ny tokony ho anton’ny fifaliana ka ankalazana sy isaorantsika an’Andriamanitra amin’izao TAONA VAOVAO izao. Ny fiaimpiainan’ny olombelona eto an-tany dia manomboka eo amin’ny fahaterahany (teboka A) ka miafara eo amin’ny fahafatesany (teboka B). Isaky ny mandingana taona iray izany izy dia miaha-manalavitra ny ny teboka A ary miaha-manatona ny teboka B hatrany. Araka izany, raha ny tena izy dia tokony ho tahotra sy horohoro, fa tsy fifaliana, no mahazo ny olona rehefa mahadingana taona iray izy satria miaha manatona ny fahafatesana izay hatahorany indrindra ny maha izy azy rehetra amin’izany. Ho antsika Kristiana anefa dia rariny raha fifaliana no hitsenantsika izany taona vaovao izany satria miaha-manatona ny fahatanteraham-piainana ao amin’Andriamanitra isika amin’izany. Ny fahafatesana no andevonan’Andriamanitra ilay Adama ela mba hananganany azy ho Adama vaovao afaka miara-miaina Aminy mandrakizay.
Faharoa, ny fandrosoana tsikelikely ho amin’ny teboka B, ho an’ny mino, dia tokony hitarika azy hitombo hatrany amin’ny maha olom-baovao azy ao amin’i Kristy. Ny taona vaovao àry dia tsy vanim-potoana fanaovan’ny mino tombana ny fiainam-panahiny ihany fa vanim-potoana hitodihana tanteraka ka handrosoany hatrany mankamin’Andriamanitra sy ny Fanjakany koa. Izany fitodihana tanteraka mankamin’Andriamanitra sy ny Fanjakany izany no antsoin’i Jesosy eto amin’ity texte anjarantsika eto ity hoe “fibebahana”. Hoy ny Malagasy: “Dian-tàna ny fiainana, itodihana ny lasa, banjinina ny ho avy”. Raha ny tena marina anefa, amin’ny Malagasy, ny fitodihana ny lasa dia ny mba hahafahana mampiasa izany na manao izany ho reference hitondrana sy hitantanana ny fiaimpiainana amin’ny ho avy. Ho an’ny Kristiana dia ny fahajentilisana (ny fiaimpiainany tao anatin’ny fanandevozan’ny ota sy devoly ary ny fahafatesana) no manamarika ny lasany. Mifanohitra amin’io fomba fisainana sy fanaon’ny Malagasy io àry dia tsy mibanjina an’izany intsony izy fa mitodika ivoho kosa ka mibanjina tanteraka ny ho aviny na ny fiainany ao amin’i Kristy Jesosy sy ny asany izay hamirapiratan’ny voninahitr’Andriamanitra (EPIFANIA), izay mandresy izany haizin’ny fahajentilisana izany ary mitondra fiadanana sy fiainana mandrakizay ho azy kosa.
Hamirapiratan’izany voninahitr’Andriamanitra ao amin’i Jesosy izay miandry ny mino Azy rehetra ao amin’ny Fanjakany amin’ny fahatanterahany izany anie ny fiaimpiainan’izay rehetra mitodika tanteraka ka manatrika Azy amin’ny famakivakiana ity taona 2017 ity. “Mibebaha àry ianareo, fa efa akaiky izany fahatanterahan’ny Fanjakan’ny Lanitra izany”. Amena.
Nosoratan’i Pastora Dr. Rafalimanana Jean De Dieu, Mpampianatra ao amin’ny Sekoly Ambony Loterana momba ny Teolojia (SALT)